HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alemà any Pennsylvanie Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Karo) Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Galicienne Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Javaney Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kosrae Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Motu Myama Navajo Nias Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Pendjabi Pendjabi (Romanina) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Alemà Soisa Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Aotrisianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Frantsay Belza Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Irlandey Tenin’ny Tanana Israelianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Jamaikanina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kenianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Nizerianina Tenin’ny Tanana Orogoayanina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Slovenianina Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Zambianina Tenin’ny Tanana any Singapour Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Malawi Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Salvadaoro Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Ticuna Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Waray-Waray Xavante Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Fahitana momba ny biby ngezabe efatra (1-8)
Nisy tandroka kely iray nipoitra (8)
Nipetraka hitsara Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be (9-14)
Zanak’olona natao mpanjaka (13, 14)
Nohazavaina tamin’i Daniela ny dikan’ilay fahitana (15-28)
Mpanjaka efatra ireo biby ngezabe efatra ireo (17)
Hahazo ny fanjakana ny olona masina (18)
Ny tandroka folo dia mpanjaka folo hipoitra (24)
7 Tamin’ny taona voalohany nanjakan’i Belsazara mpanjakan’i Babylona,+ dia nanonofy sy nahita fahitana i Daniela tamin’izy natory teo am-pandrianany.+ Dia nosoratany ilay nofy,+ ka nataony an-tsoratra izay rehetra hitany sy henony. 2 Ary hoy izy: “Nijery tao amin’ilay fahitana hitako tamin’ny alina aho, ka izao no hitako: Nifofofofo be ny rivotra efatry ny lanitra, ka nisamboaravoara ny ranomasimbe.+ 3 Dia nisy biby ngezabe efatra+ nivoaka avy tao anaty ranomasina, ary samy hafa daholo izy ireo. 4 “Nitovy tamin’ny liona ilay biby voalohany,+ saingy nanana elatry ny voromahery.+ Dia nijery ihany aho mandra-panongotra ny elany. Ningaina niala tamin’ny tany izy, ka najoro tamin’ny tongony roa hoatran’ny olona mijoro, sady nomena fon’olombelona. 5 “Dia iny koa nisy biby hafa. Io no biby faharoa, ary nitovy tamin’ny orsa ilay izy.+ Ningaina ny ila tenany, ary nisy taolan-tehezana telo teo am-bavany, teo anelanelan’ny nifiny. Ary izao no nolazaina taminy: ‘Mitsangàna dia mihinàna nofo be dia be.’+ 6 “Mbola nijery aho taorian’izay, dia iny nisy biby hafa nitovy tamin’ny leopara.+ Nisy elatra efatra hoatran’ny ela-borona teo an-damosiny, ary efatra ny lohany.+ Nomena fahefana hitondra io biby io. 7 “Mbola nijery ihany aho taorian’izay, tao amin’ilay fahitana hitako tamin’ny alina, dia nahita biby fahefatra. Nampahatahotra sy nampihoron-koditra ilay izy, sady natanjaka tsy nisy hoatr’izany. Nanana nify vy ngezabe izy io, ary nandrapaka sy nanorotoro, ka izay sisa tsy laniny dia nohitsakitsahiny.+ Hafa noho ny biby rehetra teo alohany izy, ary nanana tandroka folo. 8 Tamin’izaho mbola nijery an’ireo tandroka ireo, dia hitako fa nisy tandroka kely iray+ hafa nipoitra teo amin’izy ireo. Dia niongotra teo anoloany ny telo tamin’ireo tandroka voalohany. Nisy maso toy ny mason’olona teo amin’ilay tandroka kely, ary nisy vava nirehareha be.*+ 9 “Mbola nijery ihany aho dia nahita seza fiandrianana napetraka, ary nipetraka+ hitsara Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be.+ Fotsy mangatsakatsaka ny akanjony,+ ary toy ny volonondry madio ny volon-dohany. Afo miredareda ny seza fiandrianany, ary afo mandoro ny kodiaran’ilay izy.+ 10 Nisy renirano afo nikoriana sy nivoaka avy teo anatrehany.+ Arivoarivo* no nanompo azy, ary iray alina ampitomboina iray alina* no nijoro teo anatrehany.+ Dia natomboka ny Fitsarana,+ ka nisy boky nosokafana. 11 “Mbola nijery ihany aho tamin’izay fotoana izay satria henoko ny fireharehan’ilay* tandroka.+ Mbola nijery aho mandra-pamono an’ilay biby, ary natsipy tao anaty afo ny fatiny mba ho may sy ho levona. 12 Ny fahefan’ireo biby hafa+ kosa nesorina taminy. Nampitomboina fe-potoana iray sy vanim-potoana iray anefa ny androm-piainan’izy ireo. 13 “Mbola nijery ihany aho, tao amin’ilay fahitana hitako tamin’ny alina. Dia iny nisy hoatran’ny zanak’olona+ nanatona, niaraka tamin’ny rahon’ny lanitra. Nahazo alalana hankeo amin’Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be+ izy, ka nentina teo anatrehany. 14 Ary nomena fitondrana+ sy voninahitra+ ary fanjakana izy, ka tokony hanompo azy daholo ny vahoaka sy ny firenena ary ny olona samy hafa fiteny.+ Ny fitondrany dia fitondrana haharitra mandrakizay fa tsy handalo fotsiny, ary ny fanjakany tsy ho rava.+ 15 “Dia kivy be izaho Daniela tao anatiko tao, satria nampatahotra ahy ny fahitana hitako.+ 16 Ary nankeo amin’ny iray tamin’ireo nijoro teo aho, ka nanontaniako azy ny tena dikan’ilay izy. Dia namaly ahy izy, ary nampahafantatra ahy ny dikan’izany rehetra izany. 17 “‘Ireo biby ngezabe efatra ireo+ dia mpanjaka efatra hitsangana avy amin’ny tany.+ 18 Ny olona masin’ilay Andriamanitra Fara Tampony+ anefa no hahazo ny fanjakana.+ Ary homena azy ireo mandrakizay ny fanjakana,+ eny, mandrakizay mandrakizay.’ 19 “Ary tiako ho fantatra kokoa ny momba an’ilay biby fahefatra, izay tsy nitovy tamin’ny biby hafa rehetra. Tena faran’izay nampahatahotra izy io, ary nanana nify vy sy hoho varahina ka nandrapaka sy nanorotoro. Ary izay sisa tsy laniny dia nohitsakitsahin’ny tongony.+ 20 Tiako ho fantatra koa ny momba an’ireo tandroka folo+ teo amin’ny lohany, sy ilay tandroka hafa nipoitra ka nampianjera tandroka telo.+ Nanana maso io tandroka nipoitra io, dia nanana vava nirehareha be.* Ary ngeza noho ireo tandroka hafa ny fahitana azy. 21 “Mbola nijery ihany aho, ary hitako fa niady tamin’ny olona masina ilay tandroka ka naharesy azy,+ 22 mandra-pahatongan’Ilay Efa Nisy Hatry ny Ela Be.+ Dia nomena rariny ireo olona masin’ilay Andriamanitra Fara Tampony.+ Ary tonga ny fotoana voatondro handraisan’izy ireo ny fanjakana.+ 23 “Dia hoy izy: ‘Ilay biby fahefatra dia fanjakana fahefatra hisy eny ambonin’ny tany. Ho hafa noho ny fanjakana rehetra izy io, ary handrapaka ny tany manontolo, ka hanitsakitsaka sy hanorotoro azy.+ 24 Ary ny tandroka folo dia mpanjaka folo hipoitra avy amin’io fanjakana io. Mbola hisy mpanjaka iray hafa koa hipoitra aorian’izy ireo. Ho hafa noho ny teo alohany izy, ary handresy mpanjaka telo.+ 25 Ary hiteny zavatra hanoherana an’ilay Avo Indrindra izy,+ ka hanenjika foana an’ireo olona masin’ilay Andriamanitra Fara Tampony. Hikasa hanova fotoana sy lalàna koa izy, ary hatolotra eo am-pelatanany ireo olona masina, mandritra ny fe-potoana iray sy fe-potoana roa ary antsasaky ny fe-potoana.*+ 26 Natomboka anefa ny Fitsarana, ka nesorina tamin’io mpanjaka io ny fahefany, mba hofoanana sy horinganina tanteraka izy.+ 27 “‘Ary nomena an’ireo olona masin’ilay Andriamanitra Fara Tampony ny fanjakana sy ny fahefana ary ny fahalehibeazan’ny fanjakana eny ambanin’ny lanitra rehetra eny.+ Ny fanjakan’izy ireo dia fanjakana haharitra mandrakizay.+ Ary hanompo sy hankatò azy ireo ny fitondrana rehetra.’ 28 “Dia tapitra ilay fitantarana. Fa izaho Daniela kosa nitebiteby be noho ny eritreritro, ka lasa hatsatra ny tarehiko.* Nataoko tao am-poko anefa ny zavatra hitako sy henoko.”
^ Na: “nanao teny an’avona.”
^ Na: “Iray tapitrisa.”
^ Na: “ary 100 tapitrisa.”
^ Na: “teny an’avona nataon’ilay.”
^ Izany hoe fe-potoana telo sy tapany.
^ Na: “niova ny endriko.”